model Nooca No. 3 rows
function qaado, diirka, gooyaa oo burburisaan caws,
ku soo laabto kale caws buu u kala jejebin inuu ku soo shirtago
Size (L, W, H) 6190 * 2300 * 3259 mm
miisaanka 4400 kg
nooca sanduuqa Gear isbedelka farsamo xawaaraha + stepless (CVT)
engine model 4H11, naaftada changchai
xawaaraha 2300 r / min
taangiga Oil /
Performance width Jarida 1820 mm
saf goostay 3 saf
Qaadaaya nooca rullaluistemadka nooca double-fur
Hoolmay tirada rullaluistemadka 4 halbeeg (16 gogo ')
Hoolmay nooca rullaluistemadka nooca qabaal, isaguu caag + rullaluistemadka birta
oolnimada Work 0.4 - 0.6 hektar / saacaddii
xawaaraha Drive 2.88-20.1 km / h
xawaaraha shaqaynta markii goosashada 3.31-6.59 km / saacaddii
Max height dejinta 1780 mm
ansixin dhulka ugu hooseeya ee 290 mm
qoyaan goosashada loo baahan yahay 20% -30% (hadhuudh hadhuudh), ≤60% (oo kale caws buu hadhuudh)
height dhegta hadhuudh ≥450mm
height jirrido jajab ≤100mm
awoodda taangiga Midho 1.7m³
Straw burburiyo oo soo laabtay mashiinka 1JHY-185, 1750mm width
masaafada wheel hanuuniyo 1458 mm
Min.radius ee xariiqa qallooca markeeda bidix 6250 mm
markeeda xaq u 6200 mm
mashiinka oo dhan wuxuu qaadanayaa fikirka brand-cusub design ah oo dadka ku siinayaa a iidda cusub oo muuqaal ah.
Iyada oo nidaamka CVT ah, engine beddeli karo xawaaraha si toos ah. Waa dheeraad ah oo ku habboon in la shaqeeyaan.
Jirka Short mashiinka, masaafo gaaban wheel daafaca hore, gacan ka leexdo yar, fududahay inuu ka soo leexdo agagaarka duurka, hufnaan goosashada sare.
Miiska goynta ah ayaa ansixiyey habka qasbay quudinta ee silsilad hadhuudh garaacaysaa ah. Waxa aanu u baahan tahay ma in ay ku sugan line marka shaqada iyo loo horizontal goostay karo. Mashiinka habboon dhismeedka duwan beeritaanka hadhuudhka, meel bannaan oo isku xigta oo kala duwan, iyo noocyo kala duwan oo hadhuudh.
Anfaco double-fur gaaray duuban, jiid usha hadhuudh galay miiska magaabay wiil, ma intertwining duuban oo ku furid, stem yar jabay, hoose heerka burburka abuur.
Ay qaataan farta dabacsan technology qolof jilicsan, 4 halbeeg qalab hoolmay, 16 xabbadood hoolmay rollers, qolof nadiif ah, heerka abuur dhaawac yar iyo heerka khasaara abuur.
Qalabaysan qalab warqada-hab dib u soo kabashada abuur ah, waxa ay si deg deg ah ku dejin karaa miraha ka soo kabsaday, iyadoo waqti gaaban iyo oolnimada sare.
Qalabaysan xayndaab hore iyo slasher dhexe Straw burburiyo iyo qalabka soo laabtay, sidii xaab oo kale goynta ay yar tahay, iyo caws iyo caws leeyihiin heerka sare jabiyo.
Waxa ay ansixiyeen weyn-goobo cab si buuxda u soo lifaaqay galaas ARC, taas oo uu leeyahay beer balaadhan oo ah aragtida, si wax ku ool yaraynaysaa buuqa iyo ka dhigaysa wadista raaxo leh. * The wiishka iyo mashiinka siibi ansixiyeen qalabka la socodka alarm xawaaraha si ay ula socdaan xaaladda shaqo mashiinka oo dhan in waqtiga dhabta ah oo wax ku ool ah loo yareeyo fashilka.
Nidaamka view Rear loo qaybiyay si ay ula socdaan xaaladda ka shaqeeya ee taangiga hadhuudh iyo mashiinada hoolmay in waqtiga dhabta ah.
Anfaco kooxda daadinta hydraumatic qalab, haboon dejinta hadhuudh hawlgalka.
Gaadiidka & xirxirida:
mid ka mid ah mashiinka ka mid ah 40 feet weelka
3 saf Corn goostay
4 Corn Row Isku soo goostay
4 saf Corn goostay
beeraha Harvest Badar
Beeraha Dalagga Qalabka
Beeraha Machine Jarida
All dillaaliinta Dalag
Shiinaha saaridda Direct Supply Corn Isku soo goostay
Isku Corn goostay
Isku soo goostay
Isku soo goostay dayactir
Forces Corn goostay
Corn forgeetada magaabay
Corn forgeetada goostay
Corn Isku soo goostay
Corn Isku Dalagga Machine
Corn Forces goostay
Corn Forces Dalagga Machine
Machine Jarida Corn
Corn Daaqa goostay
Goostay Corn Waayo Sale
Corn goostay Machine
Corn goostay saaraha
Corn goostay Pakistan
Corn goostay Price
Qiimaha goostay Corn
Corn goostay Thresher
Galley Corn Isku soo goostay
Corn Galley goostay
Corn fuqaya Machine
Dawdarka Corn Waayo Sale
Corn Machine gaaray
Corn Silage goostay
Corn Machine Jarida jirid
Corn Straw goostay
Corn Machine tumo
Corn / qamadiga goostay Iyadoo CE shahaado
Machine Jarida dalagga
magaabay wiil Machine
Machine magaabay wiil Waayo Beeraha
Dhegaha Corn goostay
Calafka goostay Hindiya
Fresh Galley forgeetada dawdarka
Harvest Machine Waayo, Corn
Dalagga Qalabka Corn
Corn Karti Sare Isku soo goostay
160hp Tayada Sare Rice / Corn goostay
Tayada Sare Corn goostay
Goostay Tayada Sare
Galley Havesting Qalabka
Small Isku soo goostay
Small Corn goostay
Small Reaper gal Midho goostay
Machine Corn Sweet